RHCE certification - Olee otú ịghọ a Uhie okpu akwụkwọ engineer - ITS
RHCE certification - Olee otú ịghọ a Uhie okpu akwụkwọ engineer
Kedu ihe bụ RHCE?
Kedu ka esi enweta Asambodo Uhie Ụkpụrụ Injinia?
Kedu ihe bụ RHCSA?
Gịnị mere ị ga-eji nweta Uhie Ọkụ Ụlọnga Injinia Asambodo?
Uhie okpu uhie na-agba akwụkwọ, RHCE asambodo bụ "akara ngosi flagship" site na okpu okpu. Ọ bụ n'etiti etiti ọkwa ọkwa ọhụụ ma ọ bụ na Red Hat Certified Administrator System (RHCSA) nwere ike ịchọta ya, ihe ọmụma, nkà na ike ndị a chọrọ site na onye nchịkwa usoro nchịkwa nke Red Hat Enterprise Linux® (RHEL ) usoro. Ntughari RHCSA bu nzere ntinye ntinye maka onye nhazi usoro. Ị nwere ike ịga maka RHCE ozugbo ị zụrụ RHSCA ma nweta akwụkwọ asambodo gị.
Ụlọ ọrụ uhie uhie na-enye usoro dị iche iche nke asambodo. Ntuziaka RHCSA bu otu n'ime asambodo kachasị amara site na oru uhie uhie. Akpa Uhie nyere ule nyocha ya naanị mgbe emechara ọzụzụ. A na-enye ọzụzụ maka ndị ọkachamara IT niile na mpaghara dịgasị iche iche nke ngalaba ndị na-arụ ọrụ nlekọta nchịkwa Linux dị mkpa tinyere nrụnye, ịmepụta njikọta netwọk, njikwa nchekwa anụ ahụ, na nlekọta nchedo dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị kpebiri ịghọ onye RHCE, ị kwesịrị ịchọta ebe nrụọrụ weebụ Red Hat maka onye na-akwado ndị ọkachamara kwadoro dị nso na obodo gị. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọtụrụ ndị isi obodo ma denye aha gị maka RHCSA. Maka ikpochapu uhie okpu uhie na ule injinia, ị ghaghị inweta ihe ọmụma banyere isiokwu niile nke usoro ọzụzụ na akụkụ ndị ọzọ, dịka ndokwa nke ngwọta netwọk. Onye na-enye ọzụzụ ọzụzụ ga-enye gị ọzụzụ na ihe gbasara ihe ndị metụtara ya. Ị nwere ike ịhọrọ ịpụta maka ule nyocha udi okpu uhie dị ka usoro ịhọrọ kacha mma. A na-eduzi sessions nyocha na usoro ihe nchebe na ebe a na-anwale nyocha. I nwekwara ike ilele uzo uhie okpu uzo di iche iche ma chekwaa ule nyocha gi.
RHCSAbụ nyocha nyocha nke ntinye nke na-etinye ntọala maka ndị na-achọ ịchọrọ ịghọ ọkachamara usoro nchịkọta Linux site na ịmepụta nkwekọrịta iwu ndị dị mkpa na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Ndị a chepụtara na-ahụ n'ihu agbatị na Red okpu System nchịkwa II. Iji mezuo akaebe RHSCA, ndị na-aga aga agafe EX200, nyocha nyocha 2.5 hour. Nke kacha nta maka nyocha bụ 70%.
Nchịkọta ihe nyocha nke RHCSA:
Nchịkọta edemede nke iwu
Na-eduzi nchekwa anụ ahụ
Mụta nhazi & nhazi nke ọrụ software na components
Wụnye firewall ohere & njikọ netwọk
Nlekọta & nyocha usoro
Ịdebe na ịchịkwa faịlụ
Ijikwa ọrụ na otu
Iji nweta faịlụ Linux faịlụ
Ịmepụta na imejuputa usoro usoro
Weghachite akwụkwọ faịlụ log
Debanye aha Ugbu a
RHCSA bu asambodo "ntinye" dị mkpa maka ịghọ Red Hat akwụkwọ injinia. Usoro RHCE bụ maka ndị injinia, ndị nchịkwa usoro, ndị nchịkwa ngwa ngwa, ndị na-achịkwa igwe ojii na ndị na-azụlite igwe ojii, ndị nwere nkà na mmejuputa RHEL na ọrụ ha IT. Ọmụmụ ihe ahụ na-enye aka dị mkpa ma jide n'aka na ndị na-eme egwuregwu ga-abụ ndị mara mma na RHEL site n'ịnọgide na nyocha nyocha arụmọrụ. Icha a Ule uhie ule nyocha enye ohere ka onye ọkachamara nwee ike ịgakwuru obodo Uhie, ụdị ọmụmụ ihe; na-arụkọ ọrụ ọnụ na ịbịakwute ndị ọrụ.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ nyocha ịdebanye aha na-ajụ ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụ ajụjụ ntinye na-ederede maka ụfọdụ teknụzụ, ikpochapụ ule Ọkpụkpọ Uhie ọ bụla chọrọ ka ị rụzuo ọrụ ndị dị adị site na itinye Red Hat nka. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe a chọrọ maka usoro a, ọhụụ ọ bụla nwere na njikwa arụmọrụ ga-aba uru.
ASP.NET na OpenShift: Ịmalite na ASP.NET
Ngwukwo nkuzi 36 kacha mma nke okpu okpu iji kpoo ikike gi